ဖလက်ရှ် (Flash) ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတော်တော်များများမှာဝတ်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်ရဲ့ ကုတ်အင်္ကျီလေးကို လေလံတင်ရောင်းချပြီး ရဲတိုက်ကိုကူညီပေးမယ့် GARUDA ENTERTAINMENT – Cele Snap
ပရိတျသတျကွီးရေ….ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မငျးသားခြောရဲတိုကျဟာဆိုရငျ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကို ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးမှာသဘာဝကကြပြီပွငျပိုငျနိုငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အတှကျ ပရိတျသတျခဈြခငျအောငျပေးမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။ရဲတိုကျက အခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူတဈသားတညျးရပျတညျပေးခဲ့ပွီး လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော တကျတကျကွှကွှနဲ့ပါဝငျလှုပျရှားခဲ့တာပဲဖွဈပါ တယျ။
ပွညျသူလူထုနဲ့အတူအမှနျတရားဘကျကရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရပျတညျခဲ့တဲ့ ရဲတိုကျက ပုဒျမ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖှငျ့အရေးယူခံခဲ့ရပွီး ဧပွီလ ၃ရကျနညေ့က ရနျကုနျမွို့သမိုငျးလမျးဆုံမှာ ဖမျးဆီးခံလိုကျရတာပဲဖွဈပါတယျနျော။ရဲတိုကျတဈယောကျ ထောငျထဲမှာကနျြးမာရေးမကောငျးဘူးဆိုတဲ့သတငျးကွားရတဲ့အခါမှာလညျး ပရိတျသတျတှမြေားစှာစိတျမကောငျးဖွဈနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ။ထောငျထဲမှာအစစအရာရာအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ရဲတိုကျကိုကူညီတဲ့အနနေဲ့ ဒီကနမှေ့ာဆိုရငျလညျး ရဲတိုကျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဖလကျရျှ(Flash) ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးထဲကဇာတျဝငျခနျးတျောတျောမြားမြားမှာဝတျဆငျခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကုတျအကငြ်္ီလေးကိုလလေံတငျရောငျးခပြွီးရဲတျိုကျကို ကူညီသှားမှာဖွဈကွောငျး GARUDA ENTERTAINMENT Page ကဖျောပွထားတာကိုတှေ့ ရပါတယျနျော။
အဲ့ဒါကတော့ “အခုတခါ လလေံတငျရောငျးခမြဲ့ ကုတျအင်ျကြီ လေးကိုရဲတိုကျ ရဲ့ ဖလကျရျှ (Flash) ဇာတျကားကို နှဈသကျအားပေးခဲ့တဲ့သူတှေ မှတျမိကွမယျထငျပါတယျ။…😊😊ဇာတျဝငျခနျးအတျောမြားမြားမှာ သူဝတျဆငျခဲ့တာပါ။….😊😊ဖလကျရျှဇာတျကားနဲ့ ရဲတိုကျကို စသိခဲ့ နှဈသကျခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျတှလေညျးရှိမယျလို့ယုံကွညျတာကွောငျ့ ဒီကုတျအင်ျကြီ လေးကို.လလေံတငျရောငျးခဖြို့ ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးခဲ့ပါတယျ။…❤လလေံကွမျးခငျးစြေး ကိုမသတျမှတျထားပါဘူး။…21.6.21 နေ့ ညနေ ၆နာရီမှာလလေံပိတျသိမျးမှာဖွဈပွီး ရရှိလာတဲ့ငှကေို ရဲတိုကျအတှကျ လိုအပျတဲ့နရောတှမှောသုံးဖို့အတှကျ သူ့ရဲ့အုပျထိနျးသူထံ၁၀၀%အပွညျ့အဝ ပေးအပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။….Mobile banking. …wave pay. ..Kpay. …CB pay. ..OK$ တို့နဲ့လညျးပေးခလြေို့ရပါတယျ။GARUDA ENTERTAINMENT PAGE CONTACT ကနတေဆငျ့ ဆကျသှယျဝယျယူနိူငျပါတယျခကျခဲတဲ့အခြိနျမှာ ခဈြခငျတနျဖိုးထားပွီးအားပေးကွတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ🙏🙏🙏” ဆိုပွီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါ တယျနျော။
Source ; GARUDA ENTERTAINMENT Facebook Page
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချောရဲတိုက်ဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာသဘာဝကျကျပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်ချစ်ခင်အောင်ပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ရဲတိုက်က အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတစ်သားတည်းရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ပြည်သူလူထုနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်က ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံခဲ့ရပြီး ဧပြီလ ၃ရက်နေ့ညက ရန်ကုန်မြို့သမိုင်းလမ်းဆုံမှာ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ရဲတိုက်တစ်ယောက် ထောင်ထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြားရတဲ့အခါမှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာအစစအရာရာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ရဲတိုက်ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း ရဲတိုက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဖလက်ရှ်(Flash) ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးထဲကဇာတ်ဝင်ခန်းတော်တော်များများမှာဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီလေးကိုလေလံတင်ရောင်းချပြီးရဲတိ်ုက်ကို ကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်း GARUDA ENTERTAINMENT Page ကဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါ တယ်နော်။
အဲ့ဒါကတော့ “အခုတခါ လေလံတင်ရောင်းချမဲ့ ကုတ်အင်္ကျီ လေးကိုရဲတိုက် ရဲ့ ကို နှစ်သက်အားပေးခဲ့တဲ့သူတွေ မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။…😊😊ဇာတ်ဝင်ခန်းအတော်များများမှာ သူဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါ။….😊😊ဖလက်ရ်ှဇာတ်ကားနဲ့ ရဲတိုက်ကို စသိခဲ့ နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေလည်းရှိမယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့် ဒီကုတ်အင်္ကျီ လေးကို.လေလံတင်ရောင်းချဖို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ပါတယ်။…❤လေလံကြမ်းခင်းဈေး ကိုမသတ်မှတ်ထားပါဘူး။…21.6.21 နေ့ ညနေ ၆နာရီမှာလေလံပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ငွေကို ရဲတိုက်အတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့အတွက် သူ့ရဲ့အုပ်ထိန်းသူထံ၁၀၀%အပြည့်အဝ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။….Mobile banking. …wave pay. ..Kpay. …CB pay. ..OK$ တို့နဲ့လည်းပေးချေလို့ရပါတယ်။GARUDA ENTERTAINMENT PAGE CONTACT ကနေတဆင့် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိူင်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားပြီးအားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်🙏🙏🙏” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါ တယ်နော်။